Funda ngegama elibizwa ngegama kunye neeNqalo
Ngaba wakha wazibuza ngegama lakho lokugqibela okanye apho ifani yakho yentsapho ivela khona? Ngokulandela umvelaphi okhoyo wegama lakho lokugqibela , unokufunda okungakumbi malunga nookhokho bakho abaqala ukuzala igama lakho, kwaye ekugqibeleni, banikezele kuwe. Iintsikelelo zegama Igama ngamanye amaxesha lithetha ibali malunga nosapho lwakho, elinye linikezelwa ngamakhulu eminyaka. Ingabonakalisa apho bahlala khona, umsebenzi wabo, inkcazo yabo ngokwenyama, okanye okhokho babo.
Ukusungulwa kwegama lomntu laliza kuqalisa kwiklasi, kunye nabacebileyo okanye abanini-mhlaba abafuna ukuwasebenzisa ukuze bazisile okanye bafumane iingxelo phambi kwabahlali bezilwanyana zasemaphandleni. Kungenzeka utshintshile kwiminyaka emininzi, ngoko amagama okhokho angathatha ubuchule ekufuneni.
Ukuba uyazi isizwe sakho, unokukwazi ukufumana okungakumbi malunga negama lakho lokugqibela ngohlu lweentsingiselo kunye ne-etymologies ngokobuhlanga, njengama- English names , amagama angama-Irish, amagama asekudleni , amagama angamaFrentshi, amagama ase-Italiya, amagama angamaDanish , iSpanishi amagama , amagama aphelileyo ase-Australia, amagama aseKhanada, amagama asekhaya asePoland kunye namagama angamaYuda . Ukuba awuqinisekanga ukuba ungumvelaphi igama, zama uluhlu lwamagama angama- 100 adumile kakhulu e-US njengendawo yokuqala.
Iinguqu zegama loLuntu
Ngendlela elandelwayo, umntu unokugqiba ukuba igama lakhe lokugqibela liza kulandelela intsapho yakhe ngoobani uyise: Johnson (unyana kaYohane), okanye u-Olson (unyana ka-Ole), umzekelo.
Eli gama lingasetyenziselwa yonke intsapho, nangona kunjalo nje. Kwithuba elithile, amagama a magama aguquliwe kwisizukulwana ngasinye; kumzekelo wenkqubo leyo, unyana kaBen Johnson uza kuba nguDave Benson. Omnye umntu obeka igama lokugqibela unokukhetha igama egxile apho ahlala khona (njenge-Appleby, isixeko okanye ipulazi yokuphakamisa iifama, okanye i-Atwood), umsebenzi wakhe (uTanner okanye iThencher), okanye uphawu oluthile (olufutshane okanye oluBomvu, leyo inokuthi i-morphed kwiRed), leyo ingatshintsha kwakhona ngesizukulwana.
Ukusekwa kwegama lasemthethweni liqela labantu lingahle lenzeke naliphi na inkulungwane yesibini ukuya kwekhulu le-15 okanye nangaphezulu kamva. ENorway, umzekelo, amagama aphelileyo aqala ukuba ngumsebenzi malunga ne-1850 kwaye yayisasazeka ngo-1900. Kodwa akuzange kube ngumthetho wokufumana igama lokugqibela elide kuze kube ngo-1923. ngubani ekufuneni, njengeentsapho zinokuba nemiyalelo efanayo yegama labantwana kunye neentombi, umzekelo, kunye nonyana onokuzalwa uhlala egama linguJohn.
Xa ufuna imvelaphi okanye i-etymology yefayili yakho, qwa lasela ukuba igama lakho lokugqibela lingazange lisoloko lishicilelwe ngendlela ekhoyo namhlanje . Ngona ubuncinane kwisahlulo sokuqala sekhulu lama-20 akuqhelekanga ukubona igama lomntu ofanelekileyo elichazwe ngeendlela ezahlukeneyo ukusuka kwirekodi yokurekhoda. Umzekelo, unokuba ubona inkqonkqo ebonakalayo elula njenge-Kennedy spelled njengeKenedy, Canady, Canada, Kenneday, kunye neKendy, ngenxa yamabhalana, abafundisi kunye namanye amagosa athetha igama njengoko belizwile. Ngamanye amaxesha ezinye izinto ezahlukahlukeneyo zanyanzeliswa kwaye zagqithiselwa kwizizukulwana ezizayo. Kwakungenjalo ukuqhelekileyo ukubona abantakwabo behamba phantsi kweentlobo ezahlukileyo zegama lokuqala.
Ingqungquthela, i-Smithsonian ithi, ukuba abafuduki baseUnited States babedla ngokuba ngamagama abo okugqibela "amazwe aseMerika" ngabahloli beSiqithi sase-Ellis njengoko bephuma esi sikhephe. Amagama abo bekuya kubhalwa phantsi kweso sikhephe xa abafuduki beza kwilizwe labo elivela kuyo. Abafuduki ngokwabo babeyitshintshe amagama abo ukuba baveze amaMerika amaninzi, okanye amagama abo ayenokuba nzima ukuyiqonda ngumntu owenzayo. Ukuba umntu uthumele iinqanawa ngethuba lohambo, isipelingi sasingashintsha ukusuka kwinqanawa ukuya kuyo. Abahloli base-Ellis Island baqhubelela abantu ngokubhekiselele kwiilwimi abazithethileyo ngokwabo, ngoko bebeye benza izilungiso ekupaseni xa kufika izifiki.
Ukuba abantu ophangelayo banamagama abhalwe ngesalfabhethi esahlukileyo, njengabafuduki baseChina, eMiddle East, okanye eRashiya, ukuchithwa kungahluka ngokubanzi phakathi kwabantu, ukufuduka kwamanye amazwe, okanye amanye amaxwebhu aseburhulumenteni, ukuze ube nobuqili xa usesha.
Iingcebiso zoPhando ngamagama aqhelekileyo
Yonke yolwazi lwangasemva malunga nendlela afika ngayo amagama kwaye ayenokutshintshwa ayenzi kakuhle, kodwa uhamba njani ngokufuna umntu othile, ngokukodwa ukuba ifani iqhelekile? Xa unolwazi oluthe xa unakho kumntu, kulula ukuba lube lula ukunciphisa ulwazi.
Funda okuninzi ngomntu ngokusemandleni. Imini yokuzalwa kunye nokufa kunceda kakhulu ukunciphisa abantu phantsi, kwaye ukuba unako ukongeza igama eliphakathi, kulunge ngakumbi. Kodwa nokuba ukwazi umsebenzi wakhe kunokunceda uhlukanise okhokho bakho kwelinye idolophu.
Gcina uluhlu lwemini yomntu njengoko ufumene ukuba uncede unciphise iziphumo zophando, njengoko abantwana abancinci bebengayi kuthenga umhlaba okanye ukuhlawula irhafu, umzekelo.
Ukuba unako, xhuma umntu kumntu onelinye igama elingavamile. Ukuba uyayazi umntu otshatile umntu othile kunyaka othile okanye unobantwana bomdala othile, kunokukunceda unciphise uphando lwakho.
Funda malunga nokuxhamla komntu ngokunokwenzeka. Ukwazi idilesi yedolophu yomntu omnye kuminyaka yobalo kunokukunceda ukuba ufumane abantwana bakhe okanye abazalwana babo-okanye nabani na ohlala kwindlu efanayo-kuba iirekhodi zoluntu zangaphambili zihamba ngesitalato ngesitalato.
Iirekhodi zomhlaba kunye neerhafu zinokunceda unciphise umntu ofanelekileyo kwindawo yokuhlala yasemaphandleni-okanye unokunceda ngaphandle abantu basekuhlaleni abavela kwidolophu yokuhlala. Gcina umkhondo wolwazi oluchanekileyo lweenkcukacha. Abazala ababini ogama linguRobert Smith bahlala behlala kufuphi, ngoko ke ukuba neenombolo zomhlaba (kunye nokuzifumana kwimaphu) kunokunceda ukwahlula amadoda kunye namaqela entsapho.
Ukuzama ukucinga nge "wildcard" usebenzisa i-asterisks endaweni yezinye iileta, ngoko akumele ube negama elichanekileyo ekufuneni kwakho.
Ukumba ngeenqaku zeerekodi kunokukhungathekisa, kodwa ukuhlala uhlelwe ngamatshathi kunokuncedisa ukuba usuvele uwele uYohn Jones othile kwiluhlu lwakho okanye nokuba umntu ovela kwixesha elifanayo kunye nesixeko ngumntu ofunayo.
I-OWEN - Igama lomnxeba Umxholo kunye neNtsapho Yembali
I-COLLINS Igama lomnqophiso kunye nemvelaphi
QALISA - Yisho igama kunye nomvelaphi
I-HARTMANN Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
Igama lokugqibela elithi Peterson, Itsingiselo yalo kunye nomvelaphi
Iingqinisiso zesenzi sesiTaliyane: I-Sedere
Indlela yokugcina uYom Kippur
Imikhosi ephezulu ye-20 yamaFom Music Music
Abesifazane baPasasso: Abafazi, Abathandi, kunye neMas
Umsebenzi wezeNtlalontle okanye uNgcebiso? Yiyiphi iSigqibo Okufuneka Ndiyikhethe?
Yintoni uBen Hogan Athi Ngayo Xa Wafaka Ingqungquthela yeShek
Iimfazwe zaseJamani eziPhantsi (1524 - 1525): Ukuphakama kwabampofu
Indlela Yokuqhuba Umxholo Wophando kwiPhepha
Inkcazo ye-'Contain 'kwiGrama
Iingcaphuno ezikhunjelwayo zoSuku lomSebenzi
I-Big Break Ireland Cast
I-Sri Satyanarayan Vrata nePuja: Unqulo lweNkosi Vishnu
IYunivesithi yaseWisconsin-Admissions Parkside
Ukuphelelwa kweeSithuthuthu - I-2-Stroke Extension Chambers
Intsingiselo yoKhetho oluKhe lokuQala kunye neNqandelelo yokuSebenza kwangaphambili
Ukuchongwa kweHshetha Iimpawu zePil
Gcwalisa uluhlu lweamahlathi aseMelika weSizwe
Iimpawu eziziwayo zokuzalwa ezivela ezidumileyo